China မူလစာမျက်နှာ Humidifier China Manufacturers & Suppliers & Factory
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report
မူလစာမျက်နှာ Humidifier - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း မူလစာမျက်နှာ Humidifier ထုတ်ကုန်များ)
အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာဘလူးတုသ် Air ကို Humidifier
အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာ Bluetooth ကိုလေကြောင်း Humidifier 1 ယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာအတွက် 5: Bluetooth ကိုပျံ့, တဦးတည်းကိုအတွက် Bluetooth စပီကာ, LED စိတ်ဓါတ်များအလင်းအေးမြခိုးအငွေ့လေကြောင်း humidifier နဲ့ Desktop အလှဆင်ပေါင်းစပ်သီးခြားစီသုံးနိုင်တယ်။ သင့်ရဲ့နေအိမ်သန့်စင်:...
400ml ပန်းအိုး Wood က Ultrasonic အနံ့ပျံ့ Air ကို Humidifier
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 225mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 525 * 355 * 470mm / 12pcs
400ml ပန်းအိုးသစ်သား ultrasonic အနံ့ပျံ့လေထု humidifier Air ကို Humidifier ထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆောင်မှု: OEM / လိမ္မော်ရောင် / OBM Ultraosnic Humidifier ပရီမီယံအရည်အသွေးပစ္စည်းများ: PP ပစ္စည်းများ။ မူလစာမျက်နှာ Humidifier Adjustments အခိုးအငွေ့ output ကို: အပြင်းစားသို့မဟုတ်အားနည်း။ သစ်သားပျံ့ Led အလင်း:...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Humidifier အနံ့ပျံ့ 300 ml ကို
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Humidifier အနံ့ပျံ့ 300 ml ကို သင်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအတွေးအခေါ်များကိုထည့်သွင်းဖို့လွယ်ကူ - ကြော့ ARMOA ပျံ့ DESIGN ။ သဘာဝနှင့်စရိုက်သစ်သားစပါးကိုပျံ့သင့်ရဲ့ပြော့ရနံ့ကုထုံအဘို့အဌာနမှူးဖြစ်ပါတယ်။ LARGE စွမ်းရည်တို့နှင့်ကြီးသောအခိုးအငွေ့ - အ ultrasonic humidifier 300ml...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 185 230 * 270mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 385 475 * 560mm / 8PCS
အခိုးအငွေ့အနံ့ပျံ့ Humidifier ပြီးတော့ညအလင်း အဆိုပါစိတ်ဓါတ်များခြီးမွှောနှင့်ခက်ခဲ နေ့မှစ. စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာမှအဆင်းလှသောအနံ့ humidifier နှင့်သင်၏အာကာသဖြည့်ပါ။ ဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ humidifier ၏အကူအညီဖြင့်စက္ကန့်အတွင်း spa ကဲ့သို့ဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပါ။...
စမတ်မူလစာမျက်နှာ Humidifier အမေဇုံ Alexa Google ပင်မ အဆိုပါစမတ်ပျံ့သင့် preference အပေါ်အခြေခံပြီး, အမွှေးနံ့သာတွေနဲ့ရောစပ်ထားတဲ့ Ultra-ချောမွေ့ခိုးအငွေ့ထွက်ပေးသည်။ အဆိုပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီသည်ရေနှင့်ရောနှငျ့သငျ health- ထိုကဲ့သို့သောလျှော့ချစိတ်ဖိစီးမှု, ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်း,...
အကောင်းဆုံးစမတ် Air ကိုစင်ကြယ်စေမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2018
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 115mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 355 525 * 250mm / 12pcs
အကောင်းဆုံးစမတ် Air ကိုစင်ကြယ်စေမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2018 ဤသည် ultrasonic ပျံ့တစ်ခုအံ့သြလောက်အောင်ထက်မြက်ဘက်စုံသုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးလေကြောင်းသနျ့ရှငျးစသောသူနှင့်လေကြောင်း humidifier အဖြစ်လုပ်ဆောင်မယ့်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ဖြစ်ခြင်းအပြင်, သင်သည်သင်၏စကားသံကိုသို့မဟုတ် Wi-Fi...
အိပ်ခန်းများအတွက်မြူခိုး Air ကို Humidifiers Cool
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 235 245 * 260mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 485 505 * 540mm / 8PCS
အိပ်ခန်းများအတွက်မြူခိုး Air ကို Humidifiers Cool 360 °ဒီဂရီ HUMIDITY လွှမ်းခြုံ: အေးမြသောအခိုးအငွေ့ humidifier အထိ 226mm အမြင့်မှာသငျ့အိမျထဲမှာဖြန့်ဝေစိုထိုင်းဆတစ်ခုပင်အဆင့်ကိုသေချာ။ ချိန်ညှိအဆငျ့နှငျ့ / hr ဖြစ်သည် 160ml မှအများဆုံးအခိုးအငွေ့ output ကိုတက်နှင့်အတူ။ အဆိုပါအခိုးအငွေ့အမှုန်သင်သည်သက်သာခံစားရပါစေ,...
Ultrasonic Usb Desk ရုံးမူလစာမျက်နှာမြည်လေထု Humidifier
Ultrasonic Usb Desk ရုံးမူလစာမျက်နှာမြည်လေထု Humidifier အသွင်အပြင်: Mini ကို Usb humidifier အရွယ်အစား: Approx.125 * 165mm AC Apaptor: 5V / 1.0A ရေစွမ်းရည်: 80ml အဆင့်မြင့် Ultrasonic နည်းပညာ Mini Humidifier: 3.0MHZ ပါဝါဖွင့်ခြင်းမပြုမီ၊ tank တွင်ရေအလုံအလောက်ရှိစေရန်သေချာပါစေ၊ ဤ usb humidifier သည်ရေမရှိလျှင်ဖွင့ ်၍...
ပန်းအိုး Shape အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာ Humidifiers လုံးအိမ်
Ultrasonic White က Wood ကကောက်ပဲသီးနှံပန်းအိုးအနံ့ Humidifier 400ml အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အရောင်: အမှောင် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ / အလင်း Wood ကကောက်ပဲသီးနှံ (Optional) plug: အမေရိကန်ဗြိတိန်အီးယူအာဖရိကသမဂ္ဂ JP plug (Optional) ပစ္စည်း: PP ကို ABS ကို PC tank စွမ်းဆောင်ရည်: 400ML အချိန် Mode ကို: 1 နာရီ / 3H / 6H / ON...
အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်နှင့်အတူလွယ်ကူသောမူလစာမျက်နှာ Humidifier Ultrasonic
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 155 155 * 290mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 48 63.5 * 31cm / 12pcs
အသုံးပြုသူလက်စွဲစာအုပ်နှင့်အတူလွယ်ကူသောမူလစာမျက်နှာ Humidifier Ultrasonic specification: ကုန်ပစ္စည်းအမည်: မရှိမဖြစ်ရေနံ Humidifier ပစ္စည်း: ကို ABS / PP အလေးချိန်: 490g Size ကို: * 150 150 * 232mm စွမ်းဆောင်ရည်: 400ml Power: 12.5W အလုပ်လုပ်လက်ရှိ: 400mA ဗို့: DC က 24V 650mA ဆူညံသံ: 35dB ထက်လျော့နည်း အင်္ဂါရပ်များ: 1....
အကောင်းဆုံးလုံးမူလစာမျက်နှာအငွေ့ထုတ်စက် Humidifier 2017
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 155 155 * 170mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 325 480 * 360mm / 12pcs
အကောင်းဆုံးလုံးမူလစာမျက်နှာအငွေ့ထုတ်စက် Humidifier 2017 - ရေထွက်ပြေးလာသောအခါအော်တိုပိတ်။ -7အရောင်အလင်း, အိမ် humidifier ပျော့ illumination ပေးပါသည်။ - 400ml ရေတိုင်ကီစွမ်းရည်ရေရှည်တည်တံ့မြူများအတွက်အအေးအခိုးအငွေ့ humidifier ။ - ultrasonic စစ်ဆင်ရေးအားအသံတိတ်, ultrasonic ပျံ့သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ် relaxtion...
ဘောလုံးကို Shape အကောင်းဆုံးလုံးမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2018
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 155 155 * 210mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 325 480 * 440mm / 12pcs
ဘောလုံးကို Shape အကောင်းဆုံးလုံးမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2018 ကျစ်လျစ်, အကြမ်းဖျဉ်းပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အတူဒီဇိုင်း, သစ်သားဘောဇဉ်ပျံ့တစ်ဦးအေးမြခိုးအငွေ့ humidifier, လေသန့်ရှင်းစေသောအဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်တဲ့ 4-In-1 function ကိုနှင့်တကွကြွလာအဖြစ်ကောင်းစွာအလင်းနှင့်ရနံ့ကုထုံ LED ။ Ultrasonic ပျံ့,...
အကောင်းဆုံးအဆိတ်ငြိမ်လုံးမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2019
အကောင်းဆုံးအဆိတ်ငြိမ်လုံးမူလစာမျက်နှာ Humidifier 2019 သင့်အသက်တာကင်းစင်: က Ultra-တိတ်ဆိတ် Ultrasonic ပျံ့သန့်ရှင်းစနစ်တကျအစိုဓာတ်ကိုသင့်ရဲ့လူနေမှုအာကာသစောင့်ရှောက်။ ခြောက်သွေ့သောလေထုနှင့်တုပ်ကွေး / အအေးသင်ကူးစက်ထဲကနေပိုးမွှား, သင့်ကလေးတွေနှင့်သင့်ချစ်ရသူကိုတားဆီး။ သင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတည်ငြိမ်အောင်: အ ultrasonic...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 250mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 525 * 355 * 520mm / 12pcs
လီလီပန်းအိုးတိတ်ဆိတ်မူလစာမျက်နှာ ROOM တွင် Ultrasonic Humidifier ရနံ့ကုထုံ Humidifier: လေထု humidifier boring, ထိုဟောင်းမှနှုတ်ဆက်ပြောပါ။ အဆိုပါအနံ့ Humidifier သင့်ရဲ့လေထုစိုဓာတ်ကိုဖြည့်စွက်အပေါင်းသင့်အိမ်စေတစ်ဦးသိမ်မွေ့မွှေးအကြိုင်လတ်ဆတ်အဆင်ပြေခံစားရတယ်။ အေးမြသောအခိုးအငွေ့ humidifier:...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 158 158 * 160mm; မာစတာစက္ဏူထူ: 49 * 33 * 34cm / 12pcs
220ML မူလစာမျက်နှာ Humidifier Mini ကိုအိတ်ဆောင်ထုတ်ကုန်များ humidifier, သနျ့ရှငျးစသောသူ, ညဥ့်အလင်းနှင့်အရနံ့ကုထုံ: င်း၏ထူးခြားတဲ့မှောင်မိုက်သစ်သားစပါးကို finish ကိုနှင့် Zen-တျသှငျးခံပုံသဏ္ဍာန်ပန်းအိုးနဲ့အတူ Ultrasonic ပျံ့ခြင်း, အနံ့ပျံ့အမှန်တကယ်တဦးတည်း device အတွက်လေးခုရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်ဆောင်တယ်။...
မူလစာမျက်နှာ Humidifier ဆောင်းရာသီမှာတော့မြူခိုးအကောင်းဆုံး Cool အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုရှေးခယျြ? ကျွန်ုပ်တို့၏ရနံ့ကုထုံပျံ့တိတ်တဆိတ်သင့်အိမ်အဆင့်မြင့် ultrasonic ငွေ့ပျံ့နှံ့နည်းပညာနှင့်အတူပိုကောင်းအနံ့အောင်, တစ်ဦးပွော့မွှေးအခိုးအငွေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ultrasonic humidifier function ကို,...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 255mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 355 525 * 530mm / 12pcs
မြေတပြင်လုံးကိုနေအိမ်နေထိုင်မှု Humidifier ပစ်မှတ် Options ကို Dituo 400ml ရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့, စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ကိုဖယ်ရှားနှင့်သင့်ခံစားချက်ခြီးမွှောမှအေးမြသောအခိုးအငွေ့နှင့်အတူထိရောက်စွာသင့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖုံးလှမျး။ လေထုပျံ့, ရနံ့ကုထုံပျံ့နှင့်ရောင်စုံ LED ကညဥ့်အလင်းတဦးတည်းအတွက်ပေါင်းစပ်။...
round Shape မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကနေဒါဂျပန်အိန္ဒိယ အကောငျးဆုံး SPA ကုမ္ပဏီ-QUALITY ရနံ့ကုထုံပျံ့: မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းနှင့်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ဒီဇိုင်း, အရသာနှင့်ငြိမ်းစေလျက်ရနံ့နှင့်အတူကျယ်ဝန်းတဲ့အခန်းကိုဖြည့်ပေးနိုင်ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူခရီးဆောင်အရွယ်အစားရောက်ပြီး။ BODY,...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 160mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 355 525 * 340mm / 12pcs
အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာ Automation အငွေ့ Humidifier သန့်ရှင်းရေး ultrasonic နည်းပညာအတွက်အဆုံးစွန်နှင့်အတူဒီဇိုင်း, ဒီ ultrasonic humidifier တိတ်တဆိတ်လည်း၎င်း၏အနံ့ humidifier features တွေနှင့်အတူလေကြောင်းရန်မှအစိုဓာတ်ကိုဖြည့်စွက်၏ဆက်ပြောသည်အကျိုးအတွက်အတူမည်သည့်အာကာသ freshens တဲ့ပီတိအေး,...
မူလစာမျက်နှာအီလက်ထရောနစ် Air ကို Humidifier ပြီးတော့ Air ကိုစင်ကြယ်စေ ဤသည် ultrasonic humidifier ဒီဇိုင်းဝတ္ထု, ခေတ်သစ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာပေါင်းစပ်ဟာအရှေ့တိုင်းအမွှေးအကြိုင်ယဉ်ကျေးမှု, ထူးခြှနျအမှုန်၏5မိုက်ခရွန်ကိုလေပေါ်မှာပမှ ultrasonic ultrasonic တုန်ခါမှုစက်ရုံရနံ့ကုထုံမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံနှင့်ရေကို အသုံးပြု....
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံ Home Depot Humidifier ကနေဒါ Filter ဤသည်အနံ့ပျံ့, ပတ်ဝန်းကျင်လျှော့ပေါ့, ultrasonic ပျံ့နေတဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်ဖန်တီးဖို့တိုးတိုးလေးချောမွေ့ခိုးအငွေ့နှင့်မွှေးကြိုင်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း ultrasonic နည်းပညာချမှတ်ခြောက်သွေ့ CHAP အသားအရေပျော့ပြောင်းနှင့်ငယ်နှင့်သင်ပိုမိုလွယ်ကူအသက်ရှူကူညီပေးသည်။ functions...
မွေးကင်းစကလေးငယ်သည်နွေရာသီမှာတော့စကျင်ကျောက်ကောက်ပဲသီးနှံမူလစာမျက်နှာ Humidifier ပျော့ပြောင်းလဲအရောင်များနှင့်အခိုးအငွေ့တစ်ငြိမ်သက်စီးနှင့်အတူ, ဒီကြော့ 3-in-1 အနံ့ပျံ့, အေးမြသောအခိုးအငွေ့ humidifier နှင့်ညဉ့်-အလင်းကိုသင်ကောင်းတစ်ဦးညဥ့်ရဲ့ကြွင်းသောအရာပျော်မွေ့ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။...
မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကို eBay Walmart အမေဇုံ
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 145mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 355 525 * 310mm / 12pcs
မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကို eBay Walmart အမေဇုံ ဤအရာသည်အလွန်ရေနံပျံ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ဆန္ဒရှိအဖြစ်လေကြောင်းရန် humidifier အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မူလစာမျက်နှာ humidifier ထူးခြားတဲ့ချောမွေ့ပြောင်လက်ကြည့်နှင့်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ finish ကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးပုံစံမျိုးမဆိုအမျိုးအစားနှင့်အတူတတ်၏။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းစိတ်သေတ္တာ: * 170 170 * 165mm နဲ့ Master စက္ဏူထူ: * 355 525 * 350mm / 12pcs
သင့်ရဲ့နေအိမ်သည်စံပြမြေအောက်ခန်း Humidifier အထူးသဖြင့်အသက်အဘို့အကာနက်ရှိုင်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသည်နှင့်အကောင်းတစ်အရသာရှိသောသူတို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ 1) မူလစာမျက်နှာ humidifier ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကြော့ဒီဇိုင်း။ တိုင်းတစ်ခုတည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံကောင်းစွာသင် SPA...
ရောင်စုံ Led ညအလင်းအိတ်ဆောင် USB Mini ကို Humidifier
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်အတူသစ်သားအစေ့အိတ်ဆောင် Mini ကိုပျံ့
Amazon Ebay တွင်လွယ်ကူသောသန့်ရှင်းသောဖန်ခွက်ပျံ့ရောင်းချမှု
လှငျ USB Ultrasonic အနံ့ပျံ့မရှိမဖြစ်ရေနံ
အကြီးစားစွမ်းဆောင်ရည် Ultrasonic Humidifier မြူခိုး Cool
အိတ်ဆောင် USB Air ကို Humidifier ရနံ့ကုထုံမော်တော်ကား
မူလစာမျက်နှာ Humidifier Walmart
မူလစာမျက်နှာ Automation Humidifier
မူလစာမျက်နှာ Humidifier စနစ်
မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကို eBay
မူလစာမျက်နှာ Humidifier ကော့စ
မူလစာမျက်နှာ Humidifier Filter ကို